Dalxiiska Warshadaha - Hebei Chenli Rigging Group Co., Ltd.
Hebei Chenli Group Co., Ltd. (Chenli Group) maaraynta 3 kaabayaal ay iska leeyihiin iyo 4 shirkado laanta ay gacanta ku hayaan, waxay ku taal magaalada kor u qaadista iyo xallinta waxyaabaha ka jira gobolka Hebei, oo ah shirkad weyn oo ku takhasustay baarista 、 naqshadeynta iyo soo saarista badeecadaha iyo kor u qaadida alaabada. Taxane badan oo ka badan 3000 qeexitaanno kaladuwan, soosaarid iyo awood kulmid ayaa gaadhay 7 milyan sets.O Awoodo dhammaystiran ayaa ka horraysa tartamayaasha warshadeena.
Kooxda Chenli Group waxay leedahay tikniyoolajiyada soosaarka tayada sare leh iyo kooxda maaraynta, Nidaamka maaraynta guryaha casriga ah iyo tikniyoolajiyada habraaca maaraynta tayada ee habka howlgalka, ayaa asal ahaan la dhammeystiray isbadalkii ka yimid maamulka xakamaynta ee xakamaynta ka hortagga. Shaqaalaha nidaamsan ee tayada shaqeeya iyo tayada waxsoosaarka ayaa u dhow ama ka badan 4σ
Laga soo bilaabo 2000, shirkadaha Chenli Group oo leh shirkado maareyn cilmiyeed iyo tikniyoolajiyadda sayniska. Shirkadeena waxay maalgelisay labaatan milyan oo RMB, waxay dhistay xarun lagu tijaabiyo tayada shirkadda. Isla isla warshadaha Chenli Group ayaa ka gudbay shahaadada heerka tayada heerka caalamiga ah ee ISO9001.Idhammad 2005, badeecadu waxay ka gudubtay Yurub CE, Jarmalka tayada wax soosaarka iyo shahaadada amniga. Kooxda Chenli Group siday u kala horreeyaan sanadihii 2008, 2010, iyo 2012 waxay heleen "silsiladda qaadista", "qaadista shakaalka", "kor u qaadista sanduuqa xirxirinta" sedex shatiyo qaran,
Ujeeddada shirkadda ee Chenli Group waa in macmiilku weligiis sax yahay. Daacadnimo iyo aaminaad, ku guuleysiga ganacsiga, waqtiga xaadirka ah kooxda Chenli ee waddankeenna in kabadan 100 shirkadood oo waaweyn oo kooxda ah, mashruuca mudnaanta leh ee waddanku wuxuu soo saaray noocyo kala duwan oo badbaado leh oo lagu kalsoonaan karo iyo waxyaabaha la soo saaray. Alaabooyinka ayaa si balaadhan looga isticmaalaa mashiinada, bir-weelka, korontada, tareenka, mashaariicda ilaalinta biyaha, dekedaha, duulista, millatariga, baabuurta, batroolka iyo warshadaha kiimikada iwm. Chenli Group waxsoosaarka waxaa lagu iibiyaa in kabadan 30 gobol oo maxalli ah, magaalooyin iyo 100 gobol, Noocan oo kale ah Sida Bariga Dhexe 、 Midowga Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika iwm. Waxaa loo dhoofiyey in ka badan 50 waddan iyo gobollada .Boqoshadu si wanaagsan ayey u heleen oo ay u aaminaan macaamiisha.Udejiso taageeradaada Chenli Group waxay noqotay hal abuurka maareynta warshadaha iyo teknolojiyadda. Hogaamiyaha hal abuurka .Chenli Group waxay macaamiisha summada chenli ka dhigaysaa inay weligood hanti haystaan, kooxda Chenli waxay diyaar u tahay inay had iyo goor garab taagnaato.
Himilada maareynta ujeedada
Tayada sare, heer sare, macaamiisha ha dareemaan xasillooni dheeraad ah, kalsooni badan, si fudud!
Ujeedada shirkada maaraynta ujeedada
Hogaamiyaha curyaaminta maamulka wax soosaarka iyo hal abuurka teknolojiyada. Kooxda Chenli waxay diyaar u tahay inay had iyo jeer garab istaagto, waxay macaamiisha sumadda Chenli ka dhigeysaa inay weligood lahaadaan hanti.
Ganacsiga maareynta fikradda
Adkeyso isbadal, isbadal warshadeed oo horumarsan, faa iido farsamo, faa iidooyin markastaba la kulma shuruudaha kastamka
Ilaa 2005, Shirkadda Qing yuan Company
Ilaa iyo 2012, Shirkadda Boye
Ilaa iyo 2020, Shirkadda Jiangsu
XIDHIIDHKA CHENLI DIYAARIN DHAMMAAN adduunka oo dhan